Islam နိုင်ငံမှာ တခြားဘာသာကို ဘယ်လို နှိပ်ကွပ်လဲ | မျိုးမြန်မာ
Islam နိုင်ငံမှာ တခြားဘာသာကို ဘယ်လို နှိပ်ကွပ်လဲ
Posted by myomyanmar on April 27, 2014
Posted in: ဘာသာရေး.	Tagged: Buddha, Islam.	Leaveacomment
ယဉ်ကျေးမှုကျူးကျော်ခြင်းအားတားဆီးရေးမူအရ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များအား အီရန်အစိုးရမှလိုက်လံသိမ်းဆည်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလာမှုတိုးပွားလာခြင်းအား ရပ်တံ့စေရန် အီရန်နိုင်ငံ၊ တီဟီရန်မြို့တွင် ဗုဒ္ဓဆင်းတု တော်များအား အရောင်းဆိုင်များမှလိုက်လံသိမ်းဆည်းဟု တာဝန်ရှိအရာရှိများကပြောကြား။
အီရန်နိုင်ငံ၏တားမြစ်ကုန်စည်များထဲတွင် အမေရိကန်တီဗွီကာတွန်းသရုပ်ဆောင်အရုပ်များ၊ အမျိုးသမီး အရုပ် များအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ရုပ်ပွားတော်များကိုလည်း ထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိမှုတိုးပွားလာခြင်းအားရပ်တံ့စေရန်အတွက် တီဟီရန်မြို့တော်၏ အရောင်းဆိုင် များမှ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို အစိုးရအာဏာပိုင်များကလိုက်လံသိမ်းဆည်းနေကြောင်း လွတ်လပ်သောအာမန် နေ့စဉ်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြလိုက်သည်။
အီရန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတားဆီးရန်အတွက် အမျိုးသမီးအရုပ်များ၊ ယမင်းရုပ်များကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်မှာအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ အရှေ့တိုင်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်သောဆင်းတုများ၊ ရုပ်ပွားတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ဆန့်ကျင် မှုပြသခဲ့သည်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များနှင့်ပတ်သက်၍ ယဉ်ကျေးမှုကျုးကျော်ဝင်ရောက်လာခြင်းဟုခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း အီရန်နိုင်ငံ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ Saeed Jaberi Ansari ကပြောကြားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါသတင်းစာက ကိုးကားဖော်ပြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောရုပ်တုများမှတစ်ဆင့် အခြားတစ်စုံတစ်ရာသောယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ် ကြောင်းဖြင့် Saeed Jaberi Ansari ကပြောကြားသည်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အရေအတွက် မည်မျှသိမ်းဆည်းခဲ့သည်ကိုမူ မဖော်ပြခဲ့ဘဲ အစ္စလာမ်သာသနာတော်သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်စရာရှိသည်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
အချို့သောအီရန်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အဆိုပါဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို သူတို့၏ကားများနှင့်နေအိမ်များတွင် အလှဆင်ရန်အတွက် ၀ယ်ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်တုအများစုမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ပြီး ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသရှိ အီရန်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကင်းလွတ်ဇုန်ဈေးကွက်များမှ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ ၀ယ်တဲ့သူတွေတစ်ယောက်မှ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှလည်း ဂရုပြုမိကြတာမဟုတ်ပါဘူး…. ၀ယ်သူတွေက အလှဆင်ဖို့ဝယ်ကြပါတာဟု အရုပ်ရောင်းချသူဆိုင်ရှင် Reza Sanaei ကပြောကြားသည်။
ရုပ်တုဝယ်ယူသူ Marjan Arbabi ကလည်း သူမအနေဖြင့် အဆိုပါရုပ်တုများကိုမနှစ်သက်လှကြောင်း၊ သို့သော် လည်း သူမ၏မိဘများက အဆိုပါရုပ်တုများက လှတယ်လို့ထင်ကြတဲ့အတွက် မိဘများ၏အိမ်တွင် အဆိုပါ ဗုဒ္ဓရုပ်တုငါးခုရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံ၏အခြေခံဥပဒေအောက်တွင် အစ္စလာမ်သာသနာတော်နှင့်ယှဉ်၍ အခြားဇိုရိုအက်စ်တာအယူဝါဒ၊ ခရစ်ယာန်နှင့်ဂျူးတို့၏အယူဝါဒများကို အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ အစ္စလာမ်မဟုတ်သူများအားလုံး၏အခွင့် အရေးများကိုလည်း ယေဘူယျအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်လို့လည်း အီရန်ဥပဒေကဖော်ပြထားပါသည်။
အချို့သောအစ္စလာမ်မစ်ဝါဒီများကမူ ရုပ်တုများကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟူသော ရှုထောင့် အမြင်ဖြင့် ရုပ်တုများ၊ ပုံများထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းကို အားပေးထောက်ခံမှုမပြုကြပေ။ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှစတင်၍ အီ ရန်နိုင်ငံ၊ တီဟီရန်မြို့တော်၏လမ်းများနှင့်ရင်ပြင်များတွင် ကမ္ဘာကျော်အီရန်အနုပညာရှင်များထုလုပ်ထားခဲ့သော ရုပ်တုပေါင်းမြောက်မြားစွာမှာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ အမည်မဖော်သည့်အုပ်စုတစ်စုကမူ အနုပညာတစ် ရပ်အဖြစ် လူသားရုပ်တုရေးဆွဲခြင်း၊ ထုလုပ်ခြင်းစသည်များကို ပိတ်ပင်သည့်အစ္စလာမ်အယူဝါဒ၏ တင်းကြပ် သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များကို အပြစ်တင်ရှုံ့ချခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။
(လူ့အခွင့်အရေးမရှိဘူး၊ ဘာသာရေးကင်းလွတ်ခွင့်မရှိဘူး၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေပါတယ်လို့အော်နေတဲ့ HRW အနေနဲ့ အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ကူဝိတ် စတဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး သူတို့မြေမှာခြေချဖို့ မပြောနဲ့၊ ကျောင်းဆောက်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဖို့မပြောနဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆင်းတု၊ ရုပ်ပွားတော်၊ ပုံတော်တွေတွေ့ရင်…ဖမ်းဆီးအရေးယူနေတာကိုတော့…ဘာပြောမလဲ။)
• guardian.co.uk, Sunday 17 February 2013 13.32 GMT
• Jump to comments (152)